द भ्वाइस जित्नेले के पाँउनेछन् ? « LiveMandu
द भ्वाइस जित्नेले के पाँउनेछन् ?
२८ मंसिर २०७५, शुक्रबार १७:४६
कतारमा फाइनलको तयारी पुरा भइसकेको छ । बिभिन्न देश अनि सस्था अनि साथै नेपालबाट जाने सम्पूर्ण क्रु सदस्य र पाहुनाहरुको आवागमन भइसकेको आयोजक ले जनाएका छन् । अबको केही घण्टामा द भ्वाइस अफ नेपालको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टिभीमा अनि साथै कतारमा पुग्नु भएकाले प्रत्यक्ष हेर्न सकिने छ । आजको फाइनल संगै यसपालाको द भ्वाइस अफ नेपालको सिजन १ समापन हुनेछ तथापी द भ्वाइसले आफ्ना आवाजहरुको बिभिन्न देशमा प्रस्तुति अनि कन्सर्ट आयोजना गर्दै वल्र्ड टुर गर्ने कुरा राखेको छ ।
कुशल आचार्य, सृजय थपलीया, सिडि बिजय अधिकारी या सप्तक दुतराज ??
कस्ले पाउनेछन् त प्रथम द भ्वाइस अफ नेपालको ताज ??
यो प्रश्नको उत्तरका लागि अब धेरै समय कुरिरहनै पर्दैन् ।
पूर्णत दर्शकको भोटमा आधारित यस फाइनलमा द भ्वाइस अफ नेपालले दर्शकको भोटको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्नेछ भनें लगत्तै अब सिजन २ को अडिशन पनि शुरु गर्ने बताइएको छ । द भ्वाइसको अब लगत्तै सिजन २ को डिजिटल अडिशन शुरु गर्ने जनाइएको छ । अन्य रियालीटी शो मा झै डिजीटल अडिशनलाई घन्टौं कुनै नपर्ने अनि आफ्नो रेकर्ड घरबाटै पठाउन सकिने सहज रहेको द भ्वाइस आयोजक संस्थाले बताएको छ । यसरी डिजीटल अडिशनमा नेपाल भित्र र बाहिर जतासुकैका भएपनि नेपाली संगीतप्रेमीले आफ्नो आवाज समावेश गर्न सहज हुनेछ ।
द भ्वाइस अफ नेपाल केवल आवाजको रंगमञ्च भएकाले बिदेशी गीतको डिजीटल रेकर्ड आफ्नो भाषामा पठाएपनि केही फरक नपर्ने आयोजक बताँउदछन् । यस सिजनमा पनि बिभिन्न अन्य देशहरुबाट आवाजहरु समावेश हुन सकेका कारण डिजीटल अडिशनका कारणले नै भएको बताइन्छ । जे होस् सिजन २ मा निखारिएका आवाजहरुको प्रतिक्षामा द भ्वाइस अफ नेपाल रहने भनें पक्का छ है ।
प्रथम द भ्वाइस अफ नेपाल बन्ने आवाजले पाउनेछन् रु १५ लाख नगद, एउटा नयाँ गाडी अनि रु २० लाख बराबरको रेकर्ड डिल अनि बिश्व भ्रमण गर्ने मौका ।
आजको साँझ बिशेष छ किनभनें आज नेपाल अनि नेपालीले पाँउदैछन् आफ्नो प्रथम द भ्वाइस अफ नेपाल ।